Ukuze amazinyo bekusolo eqinile, nezinzipho futhi izinwele babe aqinile, kubalulekile ukuthatha imithi i-calcium. Ngokuvamile, lokhu yezimbiwa is udle ukudla, kodwa kungase kungabi ngempela ngokwanele ukuze kwakhiwe evamile kwezitho eziningi. Calcium - kuyinto ebalulekile umthombo ngenqubo igazi ekunqandeni, ke ohilelekile kwemizwa nendlela ezisabela ngayo kwemisipha. Lokhu amaminerali ine anti-ukucindezeleka, izakhiwo eqeda ukuvuvukala futhi anti-iguliswa.
Lihambisana namanye amavithamini okukhiphayo calcium nosawoti of izinsimbi ezisindayo emzimbeni, inikeza ukuthuthukiswa evamile amathambo, koqweqwe lwawo futhi izinwele. Kafushane, lesi sici kuyadingeka ukuze umuntu ngamunye, e abesifazane ikakhulukazi abakhulelwe nezingane ezincane.
Ungakwazi eminye ukuthola i-calcium ukulungiselela, futhi ingalungiswa isici esebenzayo kanye nokudla. Ikakhulukazi i-calcium has a lot of ubisi nemikhiqizo yalo, amantongomane, iklabishi nobhontshisi e kwasolwandle nenhlanzi.
Uma umzimba womuntu calcium akwanele, angase ukuthuthukisa kwamathambo kanye nezinye izifo. Izinwele iyoba izinzipho ziyaqothuka futhi ethambile namazinyo. umama okhulelwe nje kudingeka ukuthatha calcium ukulungiselela, ngoba ukuntula yayo kungabangela delamination kusukela amazinyo izinsini, ukuquleka, ukukhula ilibele, ubuhlungu emalungwini nezinye izikhathi edabukisayo. A abalulekile yokuntuleka calcium emzimbeni kungaholela kuwukwephula elilungile kwenhliziyo, toxicosis, ekuthuthukiseni zinhlekelele abanomfutho wegazi ophakeme, ukukhumuzeka kwamathambo, amazinga aphezulu cholesterol, futhi ngisho komqondo. Yingakho udinga ukuthatha extra calcium nokulungiselela.
I umthamo wansuku zonke ngamunye kunqunywa indlela yayo, konke kuncike isisindo nobudala, kanye nesikhundla. Calcium ukuze nabancelisayo kubalulekile, ngakho-ke kufanele uthathe cishe kabili ngaphezulu kokujwayelekile. Into wukuthi owesifazane nengane ubisi lwebele okuhambisa zonke amavithamini ezidingekayo, kuhlanganise lesi sici.
Yiqiniso, wonke umuntu omdala uyazi ngezinzuzo calcium. Nsuku zonke ezikrinini TV sibona izikhangiso eziningi ukuthi umane "zikhala" ukuthi kuyadingeka ukuthatha lesi sici. Calcium amaphilisi adayiswa e Ezimweni eziningi, ungaya kokubili lihambisana uvithamini D, kanye eceleni. Kodwa akubona bonke abantu uyazi ukuthi lesi sici kwenza kube sibalo ukwenzela ukungena okuncane kakhulu. Calcium - akuyona nje ngeziningi zezinto zokwakha, kodwa futhi umthombo wobusha, ezempilo nobuhle. By endleleni, ukuze abe "bobukhosi 'ukuma futhi ezidingekayo ukuze afake nsuku zonke i-calcium Ukudla izidakamizwa.
Owesifazane okhulelwe, njengoba kushiwo ngenhla, ikakhulukazi isidingo ukusebenzisa lesi sici. Lokhu kuzosiza ukuvimbela ukulahleka amazinyo izinwele, ukuvimbela ukubeletha singakafiki isikhathi libangela ukuphuphuma kwezisu. Ngakho-ke, ezinsukwini lokuqala "ezithakazelisayo" isikhundla sakhe kudingeka Thenga kakhulu i-calcium. Ukuze wenze lokhu, kufanele uphuze nsuku amabili izingilazi ubisi, udle imifino eluhlaza kanye izithelo ezisanda kukhiwa, udle imikhiqizo yobisi, amaqanda, ushizi namantongomane. Ngempela khona ekudleni beetroot nobhontshisi. Ibele Kuyadingeka ukusebenzisa imikhiqizo equkethe calcium. Baby idinga le amaminerali, ngoba inquma sokwanda, ukwakheka namazinyo kanye nezinye izitho. Calcium zinsiza ngesikhathi ibele uqoka udokotela, ngokuvamile i-calcium gluconate, Calcemin, Calcium D3 nezinye izinketho.
Akubona bonke abesifazane udinga ukuthatha calcium extra, kwezinye izimo, bayobe benza kahle kakhulu ngaphandle kwalo. Kulesi samuntu, umuntu ongenawo lemali calcium, ozokusebenza ngezi umzimba nge ukudla. Ngakho, kufanele abe nendikimba, izinwele, izinzipho, amathambo eqinile amahle namazinyo, kanye balahle isimo ukozela kanye ukukhathala, udinga ukuthatha calcium e amalungiselelo noma ukudla - yonke ilungelo lomuntu ngamunye lokuzikhethela.
Iqiniso mayelana indlela collagen enza umzimba
Indlela ukuqoqa libhayisikili engakwesokudla? Kanjani ukuze ahlangane isondo langemuva ibhayisikili?